AMP WordPress Plugin - fudud AMP - SO
Hada ku hagaaji websaydhkaaga aaladaha mobilada "fudud AMP" kuna cusbooneysii boggaaga Mobile Index Index . Iyadoo la adeegsanayo qalabka Google-AMP ee loogu talagalay WordPress, qoraaladaada 'WordPress' waxay helayaan nooca 'AMPHflix', kaas oo (Google doonayo) lagu keydiyo keydka Google AMP waqti ka dib sidaas darteed, marka lagu daro lambarka dhaqsaha badan ee AMPHflix, mar labaad si aad u dhaqso badan xawaareyn badan oo mobilada ah qalabka Qalabka.
Iskuday, tijaabada WP AMP fudud: Ku rakib. Dhaqaaq. Dhamaaday!
Ku rakib boggaga WordPress AMP - (si otomaatig ah)
Gal boggaaga WordPress.
Raadi "amp-cloud.de" oo rakib furaha AMP "fudud AMP"
U beddel "Plugins" -> "Plugins Installed" oo ku qoran menu-ka
U dhaqaaq "fudud AMP" ee ku jira liiska kumbuyuutarrada WordPress
Dhagsii xiriirka "Firfircoon".
WP AMP plug-in "fudud AMP" - soo dejiso:
Ku soo dejiso nooca fur-ka ee hadda ah faylka ZIP adoo adeegsanaya xiriirka soo socda ee soo socda:
"AMP fudud - nooca hadda jira"
Kaydi WP AMP plugin ee WordPress:
Ku keydi "galka" aan la furin cinwaanka WordPress hoostiisa:
... / wp-content / plugins / wp-amp-u-kacsan / ...
Gal bogga WordPress
Ka dib markii si guul leh loo rakibo AMP loona hawlgeliyo WordPress, waxaad horay u sii eegaan kartaa boggagaaga AMP.
Si aad u hesho horudhac boggaaga AMP , ku dar halbeegga "amp = 1" ee barta cinwaanka biraawsarka ee dhammaadka URL-ka maqaalka / dhajinta.
& amp = 1 - haddii xarig su'aal la isticmaalo:
Waa maxay sababta WordPress AMP plugin?
"fudud AMP" waa sheyga rasmiga ah ee Google AMP ee loogu talagalay WordPress ee ka socda amp-cloud.de wuxuuna u sameeyaa gabi ahaanba otomatik iyo lacag la'aan Google u hoggaansanaanta Xawaareynta Mobilada (AMP) ee loogu talagalay qoraaladaada WordPress!